Soomaaliyeed: Kalmad Adeegsigeeda La Dhalan-rogay. W/Q: Cali Cabdi Coomay | IctiraafNews.com
Soomaaliyeed: Kalmad Adeegsigeeda La Dhalan-rogay. W/Q: Cali Cabdi Coomay
Meelo badan ayuu galayaa adeegsiga kalmadani, hasayeeshee waa in la dhamaystiro micnaheeda si aanay ugu dhego-barjoobin dadka akhrisanaya
Soomaaliyeed, oo u dhashay dalka Soomaalilaan, Qoraa Soomaaliyeed, oo u dhashay dalka Soomaaliya, Fannaan Soomaaliyeed, oo u dhashay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, Majaajiliste Soomaaliyeed, oo u dhashay dalka Jabuuti iyo Weriye Soomaaliyeed, oo u dhashay Soomaalida waqooyiga Kiiniya. Sidaasi oo kale waxa la mid ah kalmada “Carbeed” oo noqonaysa Qoraa Carbeed oo u dhashay dalka Masar, Fannaan Carbeed oo u dhashay dalka Imaraadka, Weriye Carbeed oo u dhashay dalka Sucuudi Arabiya, Abwaan Carbeed oo u dhashay dalka Qadar IWM. Bal tusaalooyinkan dhugo:
Suxufi, qoraa ah. Hargaysa, Soomaalilaan, Calicoomay@hotmail.com